ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် များအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် နေ့လည်စာ စားပွဲ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် များအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် နေ့လည်စာ စားပွဲ	Leaveacomment
ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် များအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် နေ့လည်စာ စားပွဲ	Posted by danyawadi on January 29, 2016 in သတင်းများ	ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် များအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် နေ့လည်စာ စားပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၂၉
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ် မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၁)ရက်မြောက် အစည်းအဝေးပြီးနောက် မွန်းတည့်(၁၂)နာရီတွင် လွှတ်တော် အဆောက် အဦ ထမင်းစားခန်းမဆောင်ကြီး၌ ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယ နာယက၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြညိမ်း ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်း ကော်မတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် သက်တမ်း အတွက် ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး မှ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြ သည်။
အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က အမှာစကား ပြောကြားကြသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် တို့သည် တက်ရောက်လာကြ သူများ နှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာကို သုံးဆောင်ကြသည်။
← အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါပြန့်နှံ့လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ၀ါရင့်စစ်မှု ထမ်းဟောင်းရဲ့ မေးခွန်းကို ဟီလာရီ တုံ့ပြန်	ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း တချို့ →
Popular Posts	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	State & Region UTM Map	လိပ်ခေါင်းရောဂါနှင့် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးအမြင်	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	Rohingya to English Dictionary ( A to Z )	ဥပ​ဒေ စာအုပ်​ ၅၄ အုပ်​ ​လေ့လာရန်​ link	Recent Posts	အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေး မှုးချုပ် ဟောင်း ရခိုင် အရေး ဆွေးနွေး
လူမှုထူးချွန် ပထမ အဆင့်ကို ပထမဆုံး ရရှိသည့် ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနား ဒေါ်ပု
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,917,540 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် January 2016